ỊNYEFE KỌNTAKTỊ SITERE NA IPHONE RUO GAM AKPORO - IOS NA MACOS - 2019
Ntuziaka ndị a bụ ụzọ dị mfe ga-enyere nyefee kọntaktị sitere na iPhone gị gaa na ekwentị ekwentị gị. A ga - akọwa ụzọ abụọ: otu na - adabere na ngwanrọ n'efu nke atọ, nke abụọ - iji naanị Apple na Google. Ụzọ ndị ọzọ na-enye gị ohere idetu ọ bụghị naanị kọntaktị, ma akọwapụtara ndị ọzọ data dị mkpa na ntuziaka dị iche: Otu esi nyefe data site na iPhone na gam akporo.
Ngwa Nkwado Ndị Na-akpọ M
Ọtụtụ mgbe, n'akwụkwọ m, m na-amalite na ụzọ ndị na-akọwa otu esi eme ihe niile ịchọrọ aka, mana nke a abụghị ikpe. Ihe kacha mma, n'uche m, ụzọ isi nyefee kọntaktị sitere na iPhone ruo gam akporo bụ iji ngwa free maka Akaụntụ M Ndi ana-akpo (dị na AppStore).
Mgbe echichi, ngwa ahụ ga-arịọ ohere ịnweta kọntaktị gị, ị nwere ike izipu ha site na e-mail na vCard format (.vcf) onwe gị. Nhọrọ kachasị mma bụ izipụ ozugbo na adreesị adreesị site na gam akporo ma meghee akwụkwọ ozi a n'ebe ahụ.
Mgbe ị mepee akwụkwọ ozi na mgbakwunye na ụdị vcf faịlụ nke kọntaktsị, site na ịpị ya, kọntaktị ga-abanye na ngwa gam akporo. Ịnwekwara ike ịchekwa faịlụ a na ekwentị gị (gụnyere ịnye ya na kọmpụta), wee gaa ngwa Kọntaktị na gam akporo, ma jiri aka tinye ya.
Rịba ama: Akaụntụ M Ndi Kwusiri ike ibupu mbubata na usoro CSV ma oburu na ichoro ihe a na mberede.
Nbudata mbupụ site na iPhone na-enweghị mmemme ọzọ ma nyefe ha na gam akporo
Ọ bụrụ na ị meela ka mmekọrịta nke kọntaktị na iCloud (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ya na ntọala), mgbe ahụ, mbupụ kọntaktị dị mfe: ị nwere ike ịga icloud.com, tinye nbanye gị na paswọọdụ, wee mepee "Ndị ana-akpọ".
Họrọ niile kọntaktị dị mkpa (jide Ctrl ka ị na-ahọpụta, ma ọ bụ na ịpị Ctrl A iji họrọ kọntaktị niile), wee pịa na akara ngosi, họrọ "Mbupụ Vcard" - ihe a na-ebupụ niile kọntaktị gị na usoro (vcf faịlụ) , ghọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ na mmemme ọ bụla.
Dị ka ụzọ gara aga, i nwere ike izipu faịlụ a site na E-mail (tinyere onwe gị) ma mepee ozi enwetara na gam akporo, pịa na faịlụ mgbakwunye ka ịbubata kọntaktị na akwụkwọ adreesị, debe faịlụ ahụ na ngwaọrụ (dịka ọmụmaatụ, USB), mgbe ahụ na ngwa "Ndi ana-akpo" jiri ihe menu "Bubata".
Na mgbakwunye na nhọrọ mbubata a kọwara, ọ bụrụ na ị nwere ike ịmegharị Android iji mekọrịta kọntaktị na akaụntụ Google, ị nwere ike mbubata kọntaktị site na vcf faịlụ na ibe google.com/contacts (site na kọmputa).
E nwekwara ụzọ ọzọ ị ga-esi zọpụta kọntaktị site na kọmputa na Windows: site na ịmekọrịta mmekọrịta na akwụkwọ ndekọ adreesị Windows na iTunes (site na nke ị nwere ike mbupụ nhọrọ ndị a họpụtara na vCard usoro ma jiri ha bipụta na akwụkwọ ekwentị gam akporo).